विविध – Page7– Fewa Times
काठमाडौँ – नेपाल पञ्चाङ्क निर्णायक समितिले यसवर्षको वडादशैको टीकाको साइत तोकेको गरेको छ । समितिले टीकाको साइत असोज २१ गते विहान १०ः३५ बजे निर्धारण गरेको हो । समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. रामचन्द्र गौतमले देवी विसर्जनको साइत विहान ८ः४५ बजे निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । असोज १२ गते आइतबार......
भगवान श्री कृष्णको ८ मन्त्र जसले तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ भने जीवनका समस्याको अन्त्य हुनेछ (पुरा पढ्नुहोस्)
काठमाडौँ – आज श्रीकृष्णजन्माअष्टमी अधिराज्यभरी श्री कृष्ण भगवानको पुजा आराधना गरेर हर्षोउल्लासका साथ मनाइँदै छ । भगवान श्रीकृष्णको आराधना कुनै पनि प्रकारले गरेमा त्यो फलदायी हुन्छ । श्रीमदभागवत, गीता, मधुराष्टक र यस्तै कयौं श्लोकको माध्यमबाट श्रीकृष्णको आराधना गर्ने गरिन्छ । भगवान श्रीकृष्णको......
कसरी बनाउने डेडलक (जट्टा)
काठमाडौं – तीज पर्वमा पनि विषेश पुजा शिवजिकै गरिन्छ । शिव नाम लिने वित्तिकै जट्टाधारी रुप लाई बणन गरिन्छ । अहिले यहि जट्टा वा लट्टा लाई डेडलक भन्ने गरिएको छ । परम्परागत रुपमा साधु सन्त, फकिरहरुले मात्र कपाललाई डेडलक अर्थात जट्टा बनाउँथे । तर केही समय यता नयाँ पुस्तामा डेडलकले फेशनको रुप लिएको छ......
यसरी गर्नुहोस् तीजमा मेकअप र हेयर स्टाईल
सबै महिलाले तीजमा विशेष मेकअप गर्न खोज्छन । महिलाको विशेष चाड भएकाले आफूलाई सुन्दर बनाउन जो कोहीको प्रयास गर्छनै । यो चाडमा धेरैले सोह्र श्रृंगार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छन् । यसैले मेकअप गर्दा एकदम ध्यान पुर्याएर गर्नुपर्छ । यो चाड गर्मी मौसममा पर्ने भएकाले सबै मेकअपका सामाग्रीहरु वाटर......
यस्ता श्रीमान चाहान्छन् महिलाहरु जानि राखौँ (केटाहरुले पढ्नै पर्ने)
धेरै जसो महिलाले आफ्नो जिवनसाथि आफुले चाहेको जस्तो होस् भन्ने चाहाना हुन्छ । श्रीमानका लागि धेरै प्रकारको योजनाहरु बनाएका हुन्छन् । केटीहरु आफ्नो हुनेवाला श्रीमान कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् ? जानि राखौँ सम्मान गरोस् सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो केटीहरु आफ्नो सम्बन्ध समझदारी र इमान्दारीसँग निभाउँछन्......
पत्याउनु हुन्छ ? सपनामा देखेको नम्बरले दिलायो १० लाख डलर !
काठमाडौं – अस्ट्रेलियाका एक पुरूषले १३ वर्षअघि सपनामा देखेको नम्बरको आधारमा किनेको चिठ्ठाबाट १० लाख अमेरिकी डलर जितेका छन् । परिचय नखुलाएका ती मानिसले सपनामा देखेका ती संख्याको चिठ्ठा लगातार किन्दै आएको बताएका छन् । उनले खुसी हुँदै भनेका छन् ‘मैले मेरो टिकट अनलाइनमार्फत जाँचेपछि आफूलाई चिठ्ठा......
पति र पत्नीबीच भएका जुनसुकै कुरा प्रमाण नहुने
काठमाडौँ – पति वा पत्नीबीच भएका जुनसुकै कुरा प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने भएको छ। तर, पति वा पत्नीले स्वीकृति दिएमा भने त्यसलाई प्रकट गर्न वा प्रस्तुत गर्न मिल्नेछ । मूल ऐनको दफा ४१ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रमाण ऐन–२०३१......
शनिबार आमाको मुख हेर्न दिन : आमा खुवाउने औँसीको दिन यस्ता काम गर्नुहोस्, सबै मनोकामना पुरा हुन्छ
शनिबार आमा खुवाउने औँसी अर्थात आमाको मुख हेर्न दिन हो । नेपाली परम्परा अनुसार आमालाई विभिन्न प्रकारले पुज्ने चलन छ । यस दिन जीवित आमालाई मीठो खान लाउन दिई सम्मान गरिन्छ भने दिवङ्गत आमाको सम्झनामा तर्पण, पिण्डदान र श्राद्ध गरि सम्झना गरिन्छ । यस दिन मातृश्राद्ध गरे अक्षय पुण्य प्राप्त भई आमाले तृप्ति......
“टिक टक” भिडियो बनाउँदा गोली लागेर साथीको ज्यान गयो
काठमाडौं – भारतको नयाँ दिल्लीमा मोबाइल एप टिक टकले गर्दा एक जनाको ज्यान गएको छ । प्रहरीका अनुसार, १९ वर्षीय व्यक्तिले मोबाइल एप टिक टकमा पेस्तोलसँगै भिडियो बनाउने क्रममा उनको साथीलाई गोली लागेको हो । पुलिसका अनुसार शनिबार राती सलमान नामका एक व्यक्ति आफ्ना साथी सोहेल र आमिरसँग इन्डिया गेटको यात्रामा......
एक लिटर दूधको मूल्य १८० रुपैयाँ !
एजेन्सी – महंगीका कारण पाकिस्तानमा दूध प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ सम्म पुगेको दैनिक हिन्दुस्तानलाई उद्दृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । सो समाचारमा जनाइए अनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पनि पाकिस्तानमा आकाश छुने गरी अघि बढिरहेको छ । तरकारी तथा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पहिला नै बढेकोमा अहिले दूधको......